Madagascar - Fonjan'ny ngeza - Inona no vaovao du 14 fevrier 2019 - Survivre à Madagascar dans le milieu des infrastructures télécom et réseaux CISCO
Accueil NEXTHOPE Madagascar – Fonjan’ny ngeza – Inona no vaovao du 14 fevrier 2019
SEM Andry RAJOELINA
Madagascar – Fonjan’ny ngeza – Inona no vaovao du 14 fevrier 2019
Ela ny ela fa nivadika amin’izay ny tantara. Hatramin’izay, ny nahafantaran’ny vahoaka ny atao hoe fonja dia toerana natao hitazomana ny madinika. Zary lasa vazivazy fihomehezana teny anivon’ny fiaraha-monina ny filazana fa ny mpangalatra akoho, ny mpangala-boankazo ihany no tafiditra am-ponja. Manomboka mivadika ny zava-misy ankehitriny, angamba ato ho ato, ho lasa Fonjan’ny ngeza ny toeram-pamonjana. Tao ho ao, maro ireo olona manana ny maha izy azy eto amin’ny Firenena no lasa nialokaloka any anaty sambo any. Isan’ireny Ingahy Pety Rakotoniana, izay nalaza tamin’ny sehatra politika sy ny fitolomana. Tena nahafantarana azy ny fanaovana vavabe etsy sy eroa. Mbola voatazona any am-ponja koa hatramin’izao ny Rain’Antananarivo, Mpanolosain’ny Filoha teo aloha miisa roa koa no tafahoana any am-ponja vokatry ny raharaha maloto mahavoasaringotra azy ireo. Fa ankoatra ireto mpanao politika ireto, manomboka tafiditra am-ponja koa ireo mpandraharaha voasokajy ho trondro vaventy. Fihovana taratra eto Madagasikara avokoa ireo, ary antenaina mba tsy hijanona amin’iny famonjana ny samy Mamlagasy fotsiny ihany. Malaza ratsy amin’ny raharaha hafahafa koa mantsy ireo teratany vahiny sasantsasany. Isan’ny tena hametrahan’izy ireo dian-tanana ohatra ny fibodoana tanin’olona amin’ny alalan’ny fanaovana hosoka ny fampiasa hosoka. Eo koa ny fandrobana ny harem-pirenena, toy ny volamena sy ny vato saro-bidy. Irariana mba hihitatra ho an’ireo vahiny zatry ny lalan-dririnina ny fonja eto Madagasikara ka tys hijanona ho fonjan’ny Malagasy fotsiny ihany. Irariana mba tsy ny fitomboan’ny harenan’ireo mpiray tanindrazana ihany no hametrahan’ireo sampandraharaha maro ahiahy fa indrindra koa an’ireo vahiny misari-monina eto amintsika. Mba ho fantatra amin’izay ohatra ireo karana sy sinoa tomoin’ny afindrafindrao eto an-tanana. Raha tanteraka izay, mandresy ny fahamarinana ary resy tosika ny herin-Ravola.
Article précédentA Madagascar, le nouveau président arrête des proches de l’ancien président – Le monde du 14 février 2019
Article suivantAmperin’asa ny birao fandraisana fitarainana ao Ambotsirohatra – Taratra du 14 fevrier 2019